Iyurt entle kwifama yaseLes Reines des Prés
Méréaucourt, Hauts-de-France, France
Intente sinombuki zindwendwe onguVianney
Phila amava angenakulibaleka kule ndawo yokuhlala itofotofo esembindini wefama yethu. Ukuzola, indalo kunye nokuphilisa kuqinisekisiwe!
Ukujonga intlambo ye-Evoissons, uya kufumana kwi-yurt yethu:
Ibhedi ephindwe kabini ephakanyisiweyo kunye nesofa eguquguqukayo ekhululekile (i-160 cm ububanzi!)
Indawo yekhitshi enesinki kunye nesitovu
Akukho mbane, kodwa izibane ezitshajwayo kunye namakhandlela ziya kukhanyisa iyurt ngokufudumeleyo
Ukusondela kangangoko kwindalo kunye nasentliziyweni yefama yethu, iyurt yethu, engqukuva njengomhlaba, kunye noomatrasi bawo abapholileyo baya kukwamkela ngexesha lakho lokuphumla.
Ngedome layo leglasi, uya kulala ujonge iinkwenkwezi ngelixa uphulaphule isikhalo sezikhova ehlathini. Ndiyabulela kwiifestile zayo ezinkulu, i-yurt yindawo yokujonga yokwenyani phezu kwentlambo yase-Evoissons.
Iihawks, iinkuni ezimnyama, ii-herons, amaxhama kunye nezinye izilwanyana zasendle ziya kuvela phambi kwamehlo akho. Andisathethi ke ngomhlambi weenkomo neegusha ezitya edlelweni elingezantsi!
Ishawara (eshushu!) iyakubakho kwithango elidala lehagu lefama! 150m ukusuka kwiyurt.
Ukuba ubusuku bupholile, kwaye naphakathi ebusika, iindonga ezigqunywe ngoboya begusha kunye nesitovu senkuni zigcina lendlwana incinci ifudumeleyo. Ukuba kushushu kakhulu, iifestile ezinkulu kunye nophahla oluvulekileyo luvumela iyurt ukuba ingene umoya.
Kwaye ngokutya kwakho, ivenkile encinci enemveliso evela kwifama yethu, iimveliso ezilungileyo zasekhaya kunye neemveliso ezisisiseko zezinto eziphilayo ziya kuba sezakho ... Mkhulu, akufuneki ukuba uye kwivenkile enkulu!
Sivelisa kwifama yethu yendalo ebizwa ngokuba yi-'Les Reines des Prés', ii-sorbets zeziqhamo kunye nezityalo ezikhuliswa efama, ubusi, imifuno, kwaye sizalisa iinkomo ze-'Blonde d'Aquitaine'.
Ukuze kuthintelwe nasiphi na isiganeko ngezilwanyana zethu ezijikeleza ngokukhululekileyo kwilifa, izinja azivumelekanga efama.
Ngenkulungwane ye-12, indawo ekuyo ifama yabamba indawo ephambili encanyathiselwe kwi-abbey yaseSaint-Valéry-sur-Somme. Ukususela ngeli xesha, i-crypt isafikeleleka. Iimonki, iiTemplars kunye neeHospitallers zakha zalima le mihlaba. Le ndawo, igxile kwimbali, ngoku inendlu yasefama yenkulungwane ye-17, eyenziwe ngezitena namatye, ijikelezwe zizakhiwo zesitayile sePicardy.
Kule dolophana kukho ukuzola. Ngabemi abangaphantsi kwe-10 namhlanje. Nangona kunjalo, iMéréaucourt igcina iholo yedolophu kunye nokuzimela kwayo.
Isantya, thatha ukukhwela idonki elide emahlathini, baqaphele emihlambini yeemazi ezihamba emadlelweni, uhamba ukukhetha imifuno zabo lwegadi nekhitshi kwaye yaluma ibe itumata ivuthiwe basebaleni, bafumane Evoissons kwintlambo ibhayisekile, bafakwa Isinxibo somgcini weenyosi kwaye uhambe ujonge iinyosi, upheke esitovini okanye phezu komlilo weenkuni, .. kwifama nakwiindawo ezikufutshane, akukho kusilela kwemisebenzi ...
Umbuki zindwendwe ngu- Vianney
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Méréaucourt